म कसरी दमाई ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
२६ चैत्र २०७५ १७ मिनेट पाठ
सन् १९६५ मा भारत सरकारले डा. भीमराव अम्बेडकर जयन्तीमा दिँदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौती गरेपछि त्यसको कडा विरोध गर्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका बहुजन नायक कांशीराम (सन् १९३४–२००६) ले १९८४ मा बहुजन समाज पार्टी स्थापना गरे। उनले भनेका छन्, ‘एउटा कुकुरलाई ढुंगोले हान्नुस्, त्यो कुकुर डरले भाग्छ तर माहुरीको गोलोमा ढुंगो हान्नुस् त तिनीहरूले तपाईँलाई कसरी आक्रमण गर्नेछन् ? किनभने कुकुर एक्लै हुनाले डराउँछ तर माहुरीको झुन्ड हुन्छ र शत्रुविरुद्ध आक्रमण गर्छन्।’
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ले भारतको उत्तर प्रदेशमा बहुमत प्राप्त ग-यो भने यसकी नेत्री मायावती (बहनजी) चारपटक मुख्यमन्त्री भइसकेकी छन्। कांशीरामले नै सन् १९७१ मा अखिल भारतीय पिछडा तथा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ (बामसेफ) स्थापना गरे। यस संस्थाले हाल देशभर ‘बहुजन समुदाय’को मुक्ति अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। सन् २०१४ को भारतीय आम चुनावमा बसपा तेस्रो शक्ति (कुल खसेको मतका आधारमा) बन्न सफल भएको थियो भने नजिकै आउँदै गरेको चुनावमा देशकै प्रमुख शक्तिमध्ये एक बन्ने आकलन भइरहेको छ। र, मायावतीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ।
हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा जात– जन्मका आधारमा निर्धारण हुन्छ, कर्म (काम)का आधारमा होइन ।
को बौद्धिक/अबौद्धिक ?
बौद्धिक को हो, अबौद्धिक को हुन् ? कतिपयको सामान्य बुझाइमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिचाहिँ बौद्धिक हुन्। तर औपचारिक शिक्षा मात्रै बौद्धिकताको मापक हो त ? करिब एक दशकअघि सार्वजनिक इनार छोएको निहुँमा ललितपुर बुङ्मतीकी नानीमाया नेपालीलाई कुट्ने र सामाजिक बहिष्कार गर्ने जमातमा प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार र कम्युनिस्ट कार्यकर्ता धेरै थिए। उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका, सहरिया, सम्पन्न व्यक्तिबाट जातीय विभेद, छुवाछूत, महिला हिंसा कम हुन्छ भन्नु गलत र भ्रमपूर्ण बुझाइ हो। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा व्याप्त छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध कुन शिक्षित व्यक्तिले आवाज उठाएको छ ? अथवा त्यसविरुद्ध विद्रोह गरेको छ ? भर्खरै अझ डरलाग्दो तथ्य के बाहिर आएको छ भने बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियालगायत विकसित देशमा बसोबास गर्ने कथित उच्च जातका ९० प्रतिशत नेपालीले दलित समुदायका मानिसलाई जातकै कारण कोठा भाडामा दिँदैनन्। हाम्रो राजधानी काठमाडौँलगायतका सहरमा हुने जातीय विभेद र कोठा भाडाका दर्दनाक कहानी त भन्नै परेन। अम्बेडकरले उहिले नै भनेका थिए– ‘विज्ञान, प्रविधि र स्वतन्त्रताका कारण वर्णाश्रम व्यवस्थावादी (मनुवादी)हरू विश्वभर पुग्नेछन् र युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकसम्म जातीय विभेद विस्तार हुनेछ।’
बौद्धिक को हो, को होइन भन्ने विषयको स्पष्ट परिभाषा विश्वभर नै पाइँदैन। तर अध्ययन, खोज र लगनशीलताका साथ राष्ट्र र समाजमा व्याप्त विसंगति, रूढिवाद, असमानता, असभ्यता, अशिक्षा तथा गरिबीजस्ता समस्या समाधानका निम्ति अनेक कोणबाट उपायहरू प्रस्तुत गर्ने जो कोही बौद्धिकमा गनिन सक्छ। विडम्बना, हाम्रो देशका बौद्धिक भनिएकाहरू भने यति धेरै विभाजित एवं भ्रमित छन् उनीहरूका कतिपय तर्कले झनै राष्ट्र÷सम्बन्धित वर्ग–समुदाय नै दिग्भ्रमित हुने अवस्था आउने गर्छ। बौद्धिक वर्गका सल्लाह, सुझाव, तर्क र समाधानका उपायहरूले त समाज र राष्ट्र त्यति नसके कम्तीमा सम्बन्धित वर्ग–समुदायका मूलभूत समस्या समाधानका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो भइरहेको छैन। विभिन्न माध्यमद्वारा दैनिक पस्किने बौद्धिक खुराकबाट समाजलाई अघि बढ्ने मार्ग पहिचान गराउन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढेर गएको छ। इतिहास वा विगतका घटनाहरूलाई सुन्दर ढंगले व्याख्या गर्ने तर अबको बाटो के भन्ने सन्दर्भमा चुइँक्क नबोल्नेहरू कसरी बौद्धिक हुन सक्छन् ? विगत त तीता÷मीठा जे–जस्ता भए पनि भइसक्यो, गइसक्यो, त्यो अब फर्किन सम्भव छैन। त्यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै गल्ती, कमजोरी नदोहो¥याउने काम गर्नु पो बुद्धिमत्तापूर्ण हो त ! विद्वान्हरू त दूरद्रष्टा पो हुनुपर्छ।
हाम्रै विगतलाई हेरौँ न, दरबार(राजा)का सल्लाहकार, सहयोगी, कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीबाहेक अन्य कुरा आफूखुसी कहीँ–कतै बोल्दैनथे। दरबारले सोधेको विषयमा सल्लाह दिनेबाहेक कैयौँ महत्वपूर्ण कुरा गोप्य नै राखिन्थे। ठीक लागे राजाले कार्यान्वयन गर्थे र बोल्थे। तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, सहयोगी आफैँ कार्यकारी भए जसरी धारणा राख्दै हिँड्छन्। गाली–गलौज, विचार प्रस्तुत गर्नु तिनको काम, कर्तव्यभित्र पर्छ र !
केही दिनअघि चर्चित गायिका एवं राष्ट्रिय सभाकी सांसद् कोमल वलीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा दलित समुदायलाई अपमानित हुने शब्द प्रयोग गरिन्। त्यस सम्बन्धमा, पहिलो कुरा त उनीजस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिले विचार गरेर बोल्नुपर्ने हो, त्यो गल्ती भयो। दोस्रो, त्यो कार्यक्रम सञ्चालक र टेलिभिजनले पनि त्यस्ता शब्द हटाएर मात्रै कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपथ्र्यो। यहाँ विचारणीय कुरो चाहीँ के छ भने दुवै सदनमा दलित सांसद्हरूले यो विषयमा कुनै प्रश्न उठाएनन्। सत्तारुढ नेकपाका दलित सांसदले यो सन्दर्भमा बोल्दा अप्ठ्यारो पर्ला तर कांग्रेसका सांसदले त आवाज उठाउन सक्थे नि ! यसले दलित सांसदहरूको अवस्था, गुलामीपन, योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। फिल्म, टेलिफिल्म, विज्ञापन, समाचार र पाठ्पुस्तकहरूमा समेत जातीय विभेद र घृणाजन्य सामग्री प्रसारण एवं प्रकाशन भइरहेका छन्। तर त्यसलाई रोक्ने प्रयास भने कोही–कसैबाट हुन सकिरहेको छैन।
मेरा आमाबुबाको नागरिकतामा नाम पछाडि जातमा दमिनी÷दमाईँ लेखिएको छ। तर यहाँ मेरो प्रश्न छ– म कसरी दमार्इँ भएँ ? दमाहा (पञ्चे÷नौमती बाजामध्ये एक) बजाउने जात भएकाले दमार्इँ जात रहन गयो तर म त यो बाजा बजाउने व्यवसाय÷पेसा त गर्दिनँ। छोराछोरी कहिलेकाहीँ पैसा आइएमई गर्न जाँदा या बुबाआमा वृद्धभत्ता बुझ्न जाँदा आफ्नै जात उच्चारण गरेर बोलाउँदा आफैँलाई लाज लाग्ने अवस्थाबाट समेत मुक्त गर्न सकेन यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रले। सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न पाउने कहिले हो ? कुरा मात्रै ठूला गरेर समानता आउँदैन।
भाषा, साहित्य, गीत–संगीत, उखान, टुक्का, सिनेमा, विचार गोष्ठी आदिमा बहस, छलफल, चर्चा गरी राष्ट्रलाई सभ्य बनाउन सकिन्छ। बालबालिकाले अक्षर सिक्न सुरु गरेदेखि उच्च शिक्षा हासिल गर्दासम्म जात, भाषा, धर्म, परम्पराका विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने पाठ्यसामग्री पढ्छन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र ! शिक्षक÷शिक्षिका र साथीसंगीबाट दलित विद्यार्थी जातीय भेदभाव भोग्न बाध्य हुन्छन्। अनि सर्वसाधारणले समानताको व्यवहार कसरी सिक्न सक्छन् ? राजनीतिक दलहरूले जातीय विभेदविरुद्ध अभियान चलाए चाँडै मुक्ति प्राप्त हुन्थ्यो।
ती मित्रलाई नै सोध्न चाहन्छु– यदि वेद वाचन गरेर ती सुन्दास चेली दलितबाट ब्राह्मण भएका हुन् भने तिनलाई परम्परागत बिहे गरेर लान तयार कोही ब्राह्मण युवा छ ? घोषणा गर्न सजिलो छ तर व्यवहारमा उतार्न कठिन छ। ज्ञात रहोस्– हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा जात, जन्मका आधारमा निर्धारण हुन्छ, कर्म(काम)का आधारमा होइन। यसकारण अन्य क्षेत्रमा जस्तै मानव–मानवबीच विद्यमान विभेद, असमानता, छुवाछूतविरुद्ध पनि हाम्रा बौद्धिक बहस व्यापक बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ। अन्यथा सुन्दर, शान्त, सभ्य, विकसित र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने हाम्रो सपना सपनामै सीमित हुनेछ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ ०९:०३ मंगलबार
भारत डा._भीमराव_अम्बेडकर जयन्ती सार्वजनिक_बिदा